I-Semalt Shares Compelling Twitter Iingcebiso zokukhangela ukukhuthaza ukubandakanywa kwabaThengi
Ungayicoca njani kwaye ufumane iingxoxo ezibalulekileyo kuwe kumajelo asekuhlaleni? I-Facebook kunye ne-Twitter ngumthombo obalaseleyo wokubandakanya abantu abaninzi nakwi-intanethi.
Kufuneka ufunde ezi ndlela eziphambili ze-Twitter kunye nezicwangciso ezivela ku-Frank Abagnale, oyingcali Semalt , ukuba ufuna ukunyusa ukubandakanywa kwamakhasimende kwishishini lakho.
Ukwabelana ngeetweets ezininzi ngaphandle kwengqwalasela ingxoxo akuyi kukunika iziphumo ezifunwayo. Ngaloo ndlela, kubalulekile ukusebenzisa izixhobo zentlalo yoluntu ngobulumko kwaye ufunde iindlela ezintsha zokufumana iziphumo ezifunwayo.
Qala incoko kunye nomsakazo wokwenza uphando
I-Twitter ngumthombo obalaseleyo wokubandakanya abantu abaninzi. Kumele uthethe nabanye usebenzisa le nqonga kwaye usebenze imincintiswano yamanani, iikhankaso, imibuzo, kwaye uthabathe inxaxheba kwiintetho kunye nemifudlana yosesho yesiko. Awufanele ulibale ukusebenzisa i-hashtag ngelixa usebenzisa i-Twitter ukuba unzulu ngokukhangela abantu abaninzi nakwiziko lakho okanye kwi-intanethi yakho. Uphando oluphezulu lwe-Twitter lunceda abasebenzisi ukuba batyelele kwiingxoxo ezibalulekileyo. Ngaphezulu, banikela amathuba amaninzi ekwakheni uluntu lwakho lwe-intanethi ukuze ukwazi ukudibanisa nabantu abaninzi..Vumela usebenzise ama-hashtag, amagama angundoqo, amagama kunye neengxoxo ze-Twitter ngokufanelekileyo ukuze ufumane iziphumo ezifunwayo lula. Xa uqhuba isiganeko, kufuneka uhlale uqinisekisa ukuba ukhuthazwa kwi-Twitter kwaye kufuneka ukwazi ukutsala abantu abaninzi. Ezinye izixhobo ziyafumaneka ukuze uzibeke ngokuzenzekelayo iziganeko zakho ukuze uhlale ungenasiphelo ngexesha usebenzisa i-Twitter.
Kufuneka usebenzise inzuzo ye-Hootsuite ye-Geo-ekhona ye-Twitter Search feature ukuze ufumane iingxoxo ezifanelekileyo kakhulu kwi-intanethi. Oku kukunika i-geo-fumana i ingxoxo ukuze ukwazi ukucwangcisa nokuqalisa ukunxibelelana ngokukhawuleza xa ushicile umhla wokubakho. Ukongezelela, kufuneka ujolise abahlali ukuba unomashishini wezitena kunye nomdaka. Oku kunokwenzeka ukusebenzisa i-Twitter yokukhetha uphando oluphambili, kwaye kunceda ukufumana iingxoxo kwindawo echaphazelekayo kuphela.
Fumana abachaphazeli bamacandelo abonxibelelwano bezentlalo
I-Twitter inenzuzo kubo abayisebenzisela iingxoxo zobuchwepheshe. Ukusebenzisa le sayithi yezokuhlalisana, usenokukwazi ukufumana abachaphazeli bentlalo abangundoqo kwaye bafumane ukudibanisa nabo. Imifudlana ephezulu yophando lwe-Twitter ingasetyenziselwa ukufumana abaninzi abachaphazelayo kwishishini lakho. Kufuneka usebenzise inketho ye-Twitter yophando ukuze ufumane amagama abo kunye neeprofayili, kwaye faka i-hashtag kwakunye namazwi angundoqo. Enye imbono kukuba ungasebenzisa icebo lokuhlaziya i-Klout ukufumana abachaphazeli boshishino lakho. Vumela i-Twitter ukuphatha yonke into, kwaye unokuyonwabela impumelelo kwi-intanethi.
Kufuneka wenze uluhlu lwabalandeli bakho kwaye ubuze imibuzo malunga nabachaphazelekayo abachaphazelekayo kwishishini. Oku kuza kusindisa ixesha lakho elide, kwaye unokungena kunye nabanye ngaphandle kwengxaki. Njalo khumbula ukuba akukho ndlela engancinci kwimpumelelo, ngoko kufuneka ulungele ukusebenza nzima.